Amawebhusayithi Awaziwayo Ukukhipha Idatha - Iseluleko Semalt
Ukukhwabanisa iwebhu, okuyaziwa nangokuvuna iwebhu, kuyindlela yokusebenzisa idatha amawebhusayithi ahlukene. Amathuluzi we-Web scraping afinyelela amakhasi ewebhu ngokusebenzisa i-Hypertext Transfer Protocol futhi ahlaziye ulwazi oluwusizo njengemilayezo yakho. Ama-Bots noma abakwa-web crawlers asetshenziselwa le njongo - telefonanschluss bei umzug. Baqala ukuqoqa idatha bese bayigcina kwi-database ephakathi. Isinyathelo esilandelayo ukukhipha ulwazi olunenjongo kubasebenzisi, futhi ukuthumela amafayela kumafomethi abasebenzisekayo. Abacwaningi nabadayisi basebenzisa ama-web scrapers ukuze bakhiphe idatha abayidingayo. Amanye amawebhusayithi adume kakhulu ukukhipha idatha ashiwo ngezansi:
1. Amawebhusayithi okuhamba:
Imboni yezokuvakasha iye yathuthuka ezinyangeni zamuva, futhi manje ingenye yamabhizinisi adume kakhulu futhi angenzuzo kwinetha. Ungakwazi kalula ukudala ingosi yokuhamba futhi unikeze izindiza ezindiza zendawo nezamanye amazwe, amahhotela kanye nezinsizakalo zokudlulisela kumakhasimende akho. Kodwa-ke, kufanele uqiniseke ukuthi amadili owenzayo aphezulu. Ngalesi sizathu, ungadinga ukususa idatha kusuka kwamanye amarekhodi adumile afana ne-TripAdvisor ne-Trivago. Idatha ye-TripAdvisor yahlushwa izikhathi eziningi, futhi ungakwazi kalula ukuthuthukisa iwebhusayithi yakho siqu ngokusekelwe kwedatha yayo.
2. Amabhodi kaJobe:
Ibhodi lomsebenzi yenza kube lula ngathi ukuthola izikhundla ezifanele ukuhambisana nezilindelo zethu kanye nesizinda semfundo. Lapho inkampani idlulisela umsebenzi, ukhetho oluzokwazi ukuhambisa ukuqala kwawo namaphrofayela. Le nqubo yenziwa kuze kube yilapho inkampani ebhekene nayo ithola umbuzo oqondile. Into ebaluleke kakhulu ukuthi ibhodi lomsebenzi idinga ukuhlinzeka yilevolumu enkulu yemisebenzi eboniswayo. Ngakho-ke, ungahlanganyela inqwaba yabantu futhi ukhule ibhizinisi lakho. Sebenzisa i-Kimono Labs noma Ngenisa. Ukukhipha idatha emabhokisini ahlukene ahlukene nokwakha isiteji lapho kudingwa khona ukuhlangabezana nokunikezwa. Uma idatha isusiwe, kufanele uyilayishe ku-hard drive yakho. Futhi, qiniseka ukuthi idatha inembile futhi iqukethe izethulo ezimfushane kokubili umhloli womsebenzi nomhlinzeki womsebenzi.
3. Amawebhusayithi wezindaba:
Ukucaphuna ama-athikili wezindaba kubalulekile uma sifuna ukugcina amehlo ezenzakalweni zamanje. Iyiphi indlela engcono kakhulu yokuthola idatha? Ungasebenzisa i-crawler yewebhu noma idatha ye-scraper (okungcono ukungenisa. io) ukukhipha ulwazi oluwusizo kusuka ezizindeni ezahlukene zezindaba. I-CNN, i-BBC, nezinye izitolo zezindaba zingabhekiswa nge-Import. io kanye no-Kimono Labs. Uma okuqukethwe kukhishwe, ungayishicilela kuwebhusayithi yakho bese ngaleyo ndlela uthuthukise amazinga we-search engine. Ngokwesibonelo, uma ufuna izihloko zezindaba mayelana noDonald Trump, uzothola ulwazi oluwusizo ku-Google News. Enye yezinzuzo eziyinhloko zokusakaza izindaba zezindaba ukuthi ungayenza nganoma yimuphi ithuluzi futhi awudingi amakhono okuhlela nhlobo. Ukuze uqalise, kuyithuba legolide lokukhulisa ibhizinisi labo futhi lishaye idatha ephakeme kakhulu.